MILA FAMINDRAM-PO SY FAMPIONONANA VE? – filazantsaramada
MILA FAMINDRAM-PO SY FAMPIONONANA VE?
Publié parfilazantsaramada	 février 6, 2015 février 4, 2015 Laisser un commentaire sur MILA FAMINDRAM-PO SY FAMPIONONANA VE?
« Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ny famindram-po sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin’ny fahorianay rehetra mba hahaizany mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa. » II Kor 1:3-4a
-Fahoriana: Tsy ilaozam-pahoriana ny olombelona eto an-tany ary isan’izany ny aretina maro samihafa, eo koa ny fahafatesana, eo ny fahadisoam-panantenana amin’ny fitiavana, sy ny sisa tsy voatanisa eto..; Raha ny amin’ny ara-panahy no resahina dia lehibe amin’izany fahoriana izany ny vokatry ny fahotan’olombelona, izay mitarika fahafatesana ara-panahy ary mety mitondra amin’ny fahaverezana mandrakizay.
-Andriamanitra Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika: Tenan’Andriamanitra, i Jesosy Kristy no nirahiny ho ety an-tany hitondra sorona amin’ny alalan’ny tenany ihany. Ahazoan’ny olombelona mandray izany sorona tokana mandrakizay izany ny famelan’i Jesosy Kristy Ilay Zanaka Lahy Tokana ny helony. -Isika olombelona koa: rehefa manatona ka mandray ny fanadiovana antsika amin’ny ràn’ny Zanakondry tsy misy kilema. Izay mandray izany fanadiovana izany dia mahazo ny fananganana ho zanaka, atsangana ho zanak’Andriamanitra isika ary ny fitondran’Andriamanitra antsika dia tahaka ny Ray sy ny Zanaka. Ny fahoriana ateraky ny fahotana dia afaka tamin’ny ràn’ny Zanak’ondry izay manam-pahefana hamafa izany.
-Andriamanitra Rain’ny famindram-po: Tena famindram-po lehibe ho an’ny olombelona ny famelan-keloka satria ny heloka no mampitoetra ny olombelona eo ambany fahatezeran’Andriamanitra, ary ny fahaverezana mandrakizay no fara-tampony amin’izany. « Tsy fanatitra alatsa-drà no sitrany fa famindram-po »: tsy ny ràm-biby na ny ràntsika no ilain’Andriamanitra fa efa ampy ny ràn’i Jesosy zanany, ary izany no tena famindram-po izay ambara fa sitrany.
-Andriamanitra ny fampiononana rehetra: Matetika dia hita fa tsy zakan’ny olombelona ny fahoriana, ary dia mitady fampiononana izay etsy sy eroa izy. Ombieny ombieny dia mitady izany fampionona izany any amin’izao tontolo izao ny olona ary dia voafitaka tokoa. Raha misy fampiononana dia ny fampiononana avy amin’Andriamanitra no tena fampiononana azo antoka.
-I Paoly eto dia efa nandray tokoa ary nanandrana ny tsiron’izany fampiononana avy amin’Andriamanitra izany. Ny fampiononana avy amin’Andriamanitra dia hafa-kely satria fampiononana amin’ny fahoriana REHETRA. Ary, Paoly ihany koa eto raha nandray izany fampiononana izany, dia tsy nofihininy ho azy irery fa nentiny nampionona ny hafa koa. Ary hitantsika teo am-panombohona fa feno fisaorana an’Andriamanitra ny fony. « Isaorana anie Andriamanitra ». Raha manandrana izany tombontsoa avy amin’Andriamanitra izany isika dia afaka misaotra tahaka an’i Paoly koa fa tsy ho ny fanomezan-tsiny no mameno ny fiainantsika.
Ny Tompo Jesosy anie hampitodika antsika hiverina amin’Andriamanitra! Amen!
Publié parfilazantsaramada février 6, 2015 février 4, 2015 Publié dansUncategorized
Fihaonana tamin’ireo mpiara-miasa an-tsitra-po « Volontaire » FF.